Sihlaziya i-Amazon Fire Stick TV, enye indlela enentshisekelo kune-Chromecast | Izindaba zamagajethi
Ama-Smart TV aya ngokuya ekhona kuwo wonke amakhaya ethu. Ngisho nalabo, kunabasebenzisi abaningi abangaqedi ukujabula ngamathuba ala madivayisi, futhi ukuthi ngaphandle kwe-Samsung neTizen, kunezithiyo eziningi lezo zinkampani ezifuna ukufaka i-Smart TV ewusizo ukweqa kumathelevishini abo.
Kungakho abasebenzisi abambalwa bekhetha i-Chromecast ne-Android TV encane ngenhloso yokudla okuqukethwe kwe-multimedia kalula egumbini labo lokuphumula. I-Amazon, esesikhathini sayo yonke into, futhi yize ibivele inamadivayisi anezinhloso ezifanayo, inqume ukwethula emasontweni ambalwa edlule i-Amazon Fire TV Basic Edition, ithuluzi elincane eligxila kuwo wonke amandla okulawulwa kwe-multimedia. Ku-Actualidad Gadget sesiqale ukusebenza futhi sizokutshela ngokuhlangenwe nakho kwethu nge-Amazon Fire TV Stick Basic Edition, okusishiyele imizwa emikhulu.
Sizolandela inqubo yokuhlaziya esihlala siyilandela, ngakho-ke uma ufuna ukuzisindisa isigaba esithile ngikuphathisa ukuthi udlule enkombeni ngezixhumanisi eziqondile. Ngaphandle kokulibala okunye siya lapho nemininingwane yomkhiqizo.
1 Izici zobuchwepheshe: I-Hardware efanelekile futhi esebenzayo
2 Idizayini: Ubuncane obunokusetshenziswa ngefulegi
3 Ukupakisha nezinsiza: Umyalo owehlukanisa
4 Ukusetha: Konke kulungele ukuhamba nokungena ku-plug
5 Sebenzisa ulwazi: Imbalwa imikhawulo nokunethezeka okuningi
Izici zobuchwepheshe: I-Hardware efanelekile futhi esebenzayo
Singabantu, njengoba wazi kahle, ngaphambi kwenduku ye-HDMI efaka amandla ngaphakathi. Ikwenza lokho ngokusebenzisa inqubo ephansi yokusebenza, engeyona eyehlelo eyenziwe IMediaTek nokunikela ngesivinini se-1,3 GHz, kwanele nje imisebenzi yakho, asibhekene nomkhiqizo onqabile ngokusemandleni. I-GPU yomkhiqizo nayo iya kumkhawulo, IMali 450 Mp4 ukusebenzisa okuqukethwe kwe-multimedia nokuningi okuthe xaxa. Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, inenkumbulo yayo RAM ngoba isebenzisa i-Android, isebenzisa kuphela 1 GB Sekukonke, ngakho-ke kuyacaca ukuthi i-Operating System yenziwe kahle, ngaphandle kwalokho ukusilela kwehardware kuzobonakala kakhulu ukuthi kungasetshenziswa, futhi sesivele silindele ukuthi akunjalo.
Mayelana nesitoreji sine-8 GB isiyonke, inganwebeki futhi ihlale cishe ku-6 GB womsebenzisi ngemuva kokunciphisa isistimu yokusebenza nezinhlelo zokusebenza zomdabu. Sibheka ama-codec namafomethi wevidiyo:
Ividiyo: H.264 1080p30, H.265 1080p30; Umsindo: AAC-LC, HE-AACv1 (AAC +), HE-AACv2 (eAAC +), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM / Wave, Vorbis, AMR-NB , AMR -WB; Isithombe: JPEG, PNG, GIF, BMP
Audio: IDolby Audio, umsindo ozungezile ongu-5.1, isiteshi se-stereo esingu-2 ne-HDMI 7.1 umsindo wesiginali odlulayo.
Kuningi okunye esingakusho ezingeni lobuchwepheshe, sisele ngokuxhumana kwabo I-WiFi ac futhi kunjalo I-Bluetooth 4.1 Kokubili ukulawula idivayisi nokusakaza umsindo phakathi kwezinye izinto. Esimweni sethu asikwazanga ukuwenza usebenze ngamanethiwekhi we-2,4 GHz WiFi, into okufanele icatshangelwe.
Idizayini: Ubuncane obunokusetshenziswa ngefulegi
Asinakulindela okuningi ezingeni lokuklama, futhi empeleni sibhekene nomkhiqizo ohlose ukufihla ngemuva kwethelevishini. Ngakho-ke sino-119 x 40,4 x 13,8mm ngobukhulu bengqikithi yamagremu angama-56 esisindo, ayisindi futhi kulula ukuyisebenzisa. Njengoba bekungeke kube ngenye indlela, yakhiwe ngezinto zepulasitiki ezimnyama ngokuphelele, futhi futhi ehlose ukungabonwa kanye nethelevishini yethu, umsebenzi we-Amazon kulesi sigaba unengqondo, ngaphandle kokuthi akuvamile ukubheja ngezinto premium Ngemikhiqizo yakho, sicabanga lokho ngenhloso yokonga nokulungisa intengo, futhi siyakuqonda futhi sikushayela ihlombe lokho. Yinduku elula eneduna le-HDMI ngakolunye uhlangothi nokuxhuma kwe-microUSB ngakolunye uhlangothi. Impela ngabe ngikuqonda kangcono ukuthi i-HDMI yayikwezinye izinto ezimbi kakhulu, kepha ukunambitha imibala. Kwesinye sezisekelo sithola i-logo yeAmazon nokumamatheka kwakhe okukhulu, akukho okunye.
Ukupakisha nezinsiza: Umyalo owehlukanisa
Esinye sezici ezithinta kakhulu ukuthenga kwakho ukuthi kuyabalwa ngomyalo wakhoIzinkinobho ezilungile zokuhamba kalula futhi ngokushesha ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sayo somsebenzisi futhi zakhiwe ngezinto ezifanayo nenduku, zanele, zincane futhi ngeke zibe yisithiyo etafuleni eliseceleni. Ngokufanayo ine- I-adaptha / extender ye-HDMI kulabo abangakwazi ukufinyelela kalula i-HDMI jack, ezokwenza ukuxhumana kube lula. Ngokufanayo, yize amanye amathelevishini enikeza amandla anele ukusebenzisa la madivayisi, I-Amazon inquma ukufaka i-adaptha yenethiwekhi (ishaja elula ye-USB) ukuze ungabi nesifiso noma kufanele uthenge imikhiqizo ngokuhlukile. Iqiniso ukuthi i-Amazon icabanga ngayo yonke into ekulesi sigaba futhi imane ifuna ukukunikeza iphakethe eliphelele.
Ukupakisha okujwayelekile enkampanini yokumamatheka, uhlobo lwesikhwama samakhadibhodi esiqinile esivuleka ngakolunye uhlangothi, esicishe senzelwe ukuba kunoma iliphi ishalofu ongalicabanga. Yonke into yakhelwe ngaphakathi "kwebhokisi" ukuze ilingane kahle.
Ukusetha: Konke kulungele ukuhamba nokungena ku-plug
Ngaphandle kokuthi siyimake "njengesipho", i-akhawunti yethu ye-Amazon izofakwa ohlelweni kusengaphambili, ngakho-ke ngeke sibe nokuningi kokungena kumkhiqizo futhi kuzoqala ukusihola ngenqubo yokufaka kanye nokulanda izinhlelo zethu zokusebenza nokuqukethwe okubhaliselwe esitolo se-Amazon. Lokhu kunephuzu okufanele liqashelwe, njengoba wazi kahle ukuthi ayihambisani ne-Google Play Isitolo, okungenani ngokusemthethweni, kepha njengoba sizokutshela ngokuhamba kwesikhathi, ungangeza amafayela ".APK" ngaphandle kwenkinga eningi kakhulu. Imenyu yokumisa izosivumela sobabili ukuthi sengeze izinhlelo zokulawula zamavidiyo wevidiyo futhi Amakhibhodi we-Bluetooth namagundane enza kube lula ukuxhumana, yize sigcizelela ukuthi umyalo ungaphezu kokwanele.
Sebenzisa ulwazi: Imbalwa imikhawulo nokunethezeka okuningi
I-interface yomsebenzisi ifana ne-Android TV, yakhelwe ukuthi ikwazi ukuzulazula ngokushesha futhi kalula kusuka kurimothi yakho. Sizoba nemenyu yokuqala lapho singafinyelela khona ngokushesha kuzinhlelo zokusebenza, uhlelo lweSigaba lapho sizolanda khona izinhlelo zethu zokusebenza esitolo se-Amazon futhi ekugcineni imenyu yezilungiselelo nokuthi yini ongayilindela.
Njengoba wazi kahle, I-Fire OS isuselwa ku-Android kepha ayisekeli i-Google Play Isitolo. Enye indlela kuzoba ukwenza kusebenze ukufakwa kwezinhlelo zokusebenza bese upheqa iwebhu uze ulande i-.APK esithandayo. sizokwazi ukwenza i-Amazon Fire Stick ngezicelo zesitayela seMovistar +. Ngeshwa lezi zinhlelo zokusebenza aziklanyelwe ukusebenza neFireOS, ngakho-ke ngaphandle kwegundane le-Bluetooth sizoba nesikhathi esinzima ukuzulazula ezinhlelweni zokusebenza, ngoba irimothi ngeke isivumele.
Njengoba wazi kahle, iqukethe I-HD 1080p ephelele kuma-FPS angama-30 Iyona kakhulu i-Amazon Fire Stick Basic Edition ezosinikeza yona, inengqondo kudivayisi ethi hifinyelele ku- € 29,99 yabasebenzisi be-Amazon Prime en Lesi sixhumanisi. Uma ufuna ukusebenza okuphezulu nekhwalithi, kufanele ukhethe umncintiswano, obiza kakhulu, kepha ngaphandle kokungabaza i-Amazon Fire Stick TV iyisinyathelo esisodwa ngaphambi kweChromecast yakwaGoogle. Ukusetshenziswa kweMovistar +, i-Amazon Prime Video, iSpotify, iNetflix nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo kungaphezu kokwanele, ikakhulukazi uma kubhekwa intengo ehlekisayo.
Ngaphandle kwe-Google Play
Izingxenyekazi zekhompiyutha onqenqemeni
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Sihlaziya i-Amazon Fire Stick TV, enye indlela enentshisekelo kune-Chromecast